Bala ukuba kufanelekile na ukwenza ulwaphulo-mthetho kunye nokusetyenziswa kweselfowuni | Iindaba zeGajethi
Bala ukuba uyahlawulwa na ngokwenza ulwaphulo-mthetho kunye nokusetyenziswa kweselfowuni
Ayizokube ikokokuqala uve kusithiwa "ukwenza ulwaphulo-mthetho kweli lizwe kubiza kakhulu", kodwa njengegqwetha, kufuneka ndikwazise ukuba oku akusoloko kunjalo, kuxhomekeke kakhulu kwiimeko kunye nolwaphulo-mthetho. umbuzo. Ke ngoko, ukuba ucinga ukwenza ulwaphulo-mthetho kwaye akunakulungiseka, ndincoma ukuba usebenzise esi sicelo, ke uya kwazi ukuba iyakuhlawula okanye ayenzi senzo solwaphulo-mthetho, nangona unyanisekile, ndingathanda ukuba abafundi Yenza nasiphi na isenzo esingekho mthethweni, ukuba kunokwenzeka. Ngamafutshane, isicelo senziwe ukuze izaphuli-mthetho zazi ubunzima bomthetho oza kuwa phezu kwabo ukuba babanjiwe.
Ndiyazi ukuba le ingavakala ngathi yi "joke" elungileyo, kodwa ayisiyiyo. Enkosi Ku Bala isohlwayo sakho Uya kuba nakho ukulibala ukubonisana neKhowudi yePenal, kubandakanya nje uhlobo lolwaphulo-mthetho ofuna ukulwenza, uya kuba nakho ukwazi esona sigwebo siphezulu kunye nesona sisezantsi esinokuwiswa ngumthetho waseSpain ngenxa yoko.
Isicelo sihambelana ne-iOS kunye ne-Android, ukuze singaphosi nantoni na, kwaye ke, kwilizwe lolwaphulo-mthetho akukho kukhethwa, Kuya kubakho izaphuli-mthetho ezithanda iApple kunye nabanye abanomdla ngakumbi kwiimodeli ezisebenzisa inkqubo kaGoogle. Nangona sinyanisekile, sicinga ukuba bangaphezulu kwe-Android, ngenxa yengxaki yokungahlawuli izicelo (kwi-Android kulula kakhulu).
Asithethi ngomdlalo wevidiyo, enyanisweni, isicelo sinenguqulo ehlawulelweyo ye «Iingcali“Nangona ingayicacisi into yokuba ibhekisa kubasebenzi bezomthetho okanye ulwaphulo mthetho, into endiyicaceleyo yeyokuba xa ndijoyina ikholeji kwiinyanga nje ezimbalwa, ndiza kuyenza ukuyifumana. Ngaphezulu kolwaphulo-mthetho olunye, kunokuba yeyona euro 5 ityaliweyo ebomini bakhe. Ngapha koko, sinokuyeka ukurhabaxa, Bala isohlwayo sakho Izibhengeza njengesona sicelo sigqwesileyo samagqwetha, iijaji, abatshutshisi kunye neFCSE.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Bala ukuba uyahlawulwa na ngokwenza ulwaphulo-mthetho kunye nokusetyenziswa kweselfowuni
U-Eve V yeyona ndlela ifanelekileyo kwi-Microsoft's Surface Pro